Shiinaha Reactive Warshadda dhalaalida kulul, CE, Soosaarayaasha - Tiknoolajiyadda Daarista (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Koollo dhalaalid kulul>Dareem kulul kulul
Alaabta guriga ee kuleylka kuleylka kulul
Qalabka koollada kulul ee dhalaalaya alaabta guryaha waa nooc ka mid ah koollo kulul oo dhalaalaya polyurethane, kaas oo leh caabbinta heerkulka sare, caabbinta rinjiga, iska caabbinta biyaha, iyo xoojinta isku xirnaanta. Waxaa naga go'an inaan siino xabag-dhalaal tayo sare leh oo leh qaab dhismeed deggan iyo gaarsiinta waqtigeeda. Waxaan ku guuleysanay kalsoonida macaamiisha ASEAN iyo suuqyada EU.
Dharka isku-dhafan ee isku-dhafan ee isku-dhafan dhalaalaya kululeeyaha
Dharka isku-dhafan ee isku-dhafan ee isku-dhafan isku-dhafka isku-dhafka ah waa fal-celin polyurethane kulul oo dhalaalaya, kaas oo leh caabbinta heerkulka sare, iska caabinta heerkulka hooseeya iyo caabbinta dareeraha. Marka la barbardhigo koollada dhalaalka kulul, xoogga isku xidhka ayaa si weyn loo hagaajiyaa. Waxaa naga go'an inaan siino tayo sare oo dhalaalaya kululaynta, oo leh qaab dhismeed deggan iyo gaarsiinta waqtigeeda. Waxaan ku guuleysannay kalsoonida macaamiisheenna suuqyada ASEAN iyo EU.
Automotive gudaha reactive xabagta dhalaali kulul
Miliqda kulul ee reactive waa nooc ka mid ah koollo kulul oo dhalaalaya polyurethane, kaas oo leh astaamaha u adkeysiga heerkulka sare, iska caabinta heerkulka hooseeya iyo iska caabinta dareeraha. Marka la barbardhigo koollada dhalaalka kulul, xoogga isku xidhka ayaa si weyn loo hagaajiyaa. Waxaa naga go'an inaan siino xabag-dhalaal tayo sare leh oo leh qaab dhismeed deggan iyo gaarsiinta waqtigeeda. Waqtigan xaadirka ah, waxaan u dhoofinaynaa in ka badan toban dal oo ASEAN iyo EU ah, waxaan ku guuleysaneynaa kalsoonida iyo taageerada macaamiisha suuqa.
Qalabka dhismaha koollo dhalaalid kulul ayaa falceliya
Dhalashada kulul ee falcelinta ah waa nooc ka mid ah koollo kulul oo dhalaalaya polyurethane, kaas oo leh awood bilow ah oo aad u fiican, iskutallaab iyo shaqo daaweyn, awoodda isku xirnaanta ugu dambeysa ee sare, ma jiro dareeraha dabiiciga ah, waxyaabaha adag ee 100%. Waxaa naga go'an inaan siino xabag-dhalaal tayo sare leh oo leh qaab dhismeed deggan iyo gaarsiinta waqtigeeda. Waxaan ku guuleysanay kalsoonida macaamiisha ASEAN iyo suuqyada EU.
Baakadaha caaga ah ee kuleylka kulul ee dhalaalaya kululeeyaha
Dhalashada kulul ee reactive waa nooc ka mid ah koollo kulul oo dhalaalaya polyurethane. Marka la kululeeyo si uu u dhalaaliyo, waxay uga falcelin doontaa biiyaha hawada si ay u sameysato polymer sare oo leh isku xirnaan xad dhaaf ah. Ka dib markii lagu daboolay dusha sare ee substrate, iskudhufku aad ayuu u sarreeyaa. Sanadihii la soo dhaafay, dhejiskayaga dhalaalka kulul ayaa ku guuleystay kalsoonida iyo taageerada macaamiisheena suuqyada ASEAN iyo EU.